12 Xayawaanada Gaarka Ah Ee Lagu Arko Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 12 Xayawaanada Gaarka Ah Ee Lagu Arko Yurub
Midab leh, qalaad, oo aan caadi ahayn muuqaalada iyo meesha lagu noolaado, waxaad ka heli doontaa kuwan 12 xayawaanka xayawaanka ugu gaarka ah ee lagu arko Yurub. deggan badweynta ugu dheer, buuraha Alps, ama lagu nasto dhirta dhirta yurubiyanka ah ee cagaaran, hubi inaad ka feejignaato xayawaanadan duurjoogta ah ee cajiibka ah ee ku xiga escapade ee Yurub.
1. Xayawaanada Gaarka Ah Ee Lagu Arko Yurub: Lynx Yurub
Degan Switzerland, France, Italy, iyo Czech Republic, Lynx-ka yurub waa xayawaan duurjoog ah oo gaar ah. Lynx wuxuu leeyahay dabo gaaban, dhogorta bunni leh dhibco, si fudud in lagu arko keynta jiilaalka ee barafka.
Waxaad ka heli doontaa bisadan duurjoogta ah nooc xiise leh oo ah bisad guri, iyo haramcad duurjoogta ah.
Xagee Ka Arkaa Lynx-ka Yurubiyaanka Yurub?
The Forest Bavarian waa meel layaableh oo lagu arko Lynxes iyo faracooda.
2. Xayawaanada Gaarka Ah Ee Lagu Arko Yurub: Puffin
Waxaad ku arki kartaa xayawaankan quruxda badan kuwa ugu wanaagsan bartamihii Abriil agtooda xeebta dusheeda. Tusaale ahaan, Jasiiradda Skomer ee Galbeedka Wales waa meel aad u wanaagsan oo loogu talagalay duurjoogta iyo sawir qaadista Puffin. Intaa waxaa dheer, xeebta Brittany waa meel kale oo la yaab leh oo lagu riyaaqo shimbiraha badda ee Atlantic.
Puffins waxay gaarayaan ilaa 30 cm oo dherer ah iyo 20 cm dherer ah. Waxaa intaa dheer, leh liin dhanaan ah oo indhaha ku wareegsan, waxaad ogaan doontaa inay aad ufudud yihiin in lagu arko shimbirahaan quruxda badan ee ku yaal buuraha badda dusheeda. Iyadoo 90% dhammaan dadweynaha adduunka ku nool Yurub, waad u bogi kartaa gumeysiga dhan xeebaha Yurub sanadka intiisa badan.
Halkee baan ka arki karaa Puffins-ka Yurub?
Xeebta Brittany ee Faransiiska iyo Jasiiradda Skomer ayaa ah meelo aad u wanaagsan oo aad ku arki karto Puffin.
3. Xayawaanada Gaarka Ah Ee Lagu Arko Yurub: Saiga
Saiga waa xayawaan gaar ah, nasiib daro, khatar ku jirta maalmahan. Saiga ayaa ka mid ah 12 xayawaanka ugu badan ee aad ku arki karto Yurub. Oo leh sankeeda aan caadiga ahayn, xayawaankan gaarka ahi wuxuu si fudud ula qabsan karaa cimilada qabow iyo kulul, maadaama foomka sanku u adeego ujeedkan.
Sidaa darteed, Saiga ma laha guri go'an oo wuu u guuri karaa ilaa 1000 km u dhexeeya xagaaga iyo jiilaalka. Waxaa intaa dheer, waxay socon kartaa tobanaan kilomitir maalintii waxayna inta badan firfircoon tahay inta lagu jiro maalinta. Xaqiiq xiiso leh oo ku saabsan Saiga ayaa ah in lagu daro dhirta iyo cawska, waxay cuntaa dhirta sunta leh xoolaha kale.
Xagee Ka Arkaa Saiga Yurub?
Waxaad ku arki kartaa Saiga buuraha Carpathian ee quruxda badan iyo keymaha.
4. Xayawaanada Gaarka Ah Ee Lagu Arko Yurub: Pine Marten
Haddii aad dhacdo inaad ku dhex socoto kaymaha Yurub iyo dhirta dhirta waxaad u badan tahay inaad la kulanto Pine Marten. Pine Martens waxay ku nool yihiin godadka geedaha waana kuwo fuulaya wax fiican, markaa hubi inaad fiiriso haddii aad rabto inaad ku aragto abuurkan gaarka ah.
Pine Martens waxay ku jiraan midabka xabadka-bunni, oo leh qoorta qoorta oo ah hudheel fudud oo huruud ah. Sidaa darteed xitaa dhulka keymaha ah, way adkaan doontaa in lagu seego xayawaankan xiisaha leh laanta geedka, oo leh buugaas huruudda ah.
Halkee baan ku arki karaa Pine Martens?
Buuraha sare ee Scotland iyo Ireland, waa meelaha ugufiican ee lagu arko Pine Marten.
5. Xayawaanada Gaarka Ah Ee Lagu Arko Yurub: Lizard Cagaaran ee Yurub
at 40 cm cabir ahaan, runtii way adkaan doontaa in lawaayo qorraxda cagaaran ee yurub. Hangaraaracdan gaarka ahi waxay leedahay dhabarka cagaaran oo dhalaalaya iyo calool jaalle ah. Waxa xiiso leh, inta lagu guda jiro xilliga isku-tagga, labku wuxuu isku beddelaa midabkiisa buluug dhalaalaya.
Lizard-ka Cagaaran wuxuu ku nool yahay joog sare 2000 mitir, sidaas darteed, intaad fuuleyso buuraha Austria, hubi inaad fiiriso hareerahaaga. Haddii aad safraysid deyrta illaa jiilaalka, markaa waxaad u badan tahay inaad ku aragtid qoob-ka-ciyaarkan godadka iyo meelaha qarinta ee qallalan. Si kastaba ha ahaatee, xagaaga, laga bilaabo Maarso, quruxdaani waxay kulaylinayaan qoraxda.
Xagee Ka Arkaa Lizardka Cagaaran?
Waxaad ku arki kartaa qorraxdaan cagaaran qorraxda oo dhagaxyo dul fadhiya, guud ahaan Yurub, Austria, Germany, ilaa Romania iyo Turkiga.
6. Xayawaanada Gaarka Ah Ee Lagu Arko Yurub: Flamingo casaan ah
The flamingos qurux badan oo casaan ah ayaa ku nool mid ka mid ah keydka duurjoogta ugu fiican in Europe. Flamingos-casaan waxay ku nool yihiin fardo duurjoog ah oo cajiib ah oo ku yaal keydka Camargue ee Faransiiska. Flamingo casaan ah waxay noqotay astaanta Camargue, midabbada casaanka ah ee firfircoon.
Meelaha biyo mareenada, marshland, ama duulaya, iyagoo muujinaya quruxdooda, flamingo casaanku waa muuqaal la yaab leh. Markaad dhex socoto 4 jidadka Camargue, waxaad si dhakhso leh u fahmi doontaa sababta shimbirtan ay ka mid tahay 12 xayawaanka ugu badan ee lagu arko Yurub.
Halkee baan ka arki karaa Flamingo casaan ah oo ku yaal keydka Camargue?
Camargue waa keyd dabiici ah oo weyn oo ku yaal Faransiiska. Si loo arko shimbirtan gaarka ah, madax u ah Beerta Ornithological.
7. Nibiriga Ireland
Haddii ay dhacdo inaad ku shiraacato Koonfurta Ireland, meel fog, madaxa garaaca ayaa laga yaabaa inuu ka soo baxo biyaha hoostooda. Tani waxay noqon kartaa nibiriga Humpback, nibiriga weyn ee weyn ee ku nool badda ku xeeran Ireland.
In kasta oo cabirkoodu aad u fiicanyahay oo cabsi gelin leh, 12-16 mitir, iyagu waa kuwo aan dhib lahayn oo dabacsan. Nibibyadan quruxda badani waxay yimaadaan xilliga deyrta, iyagoo qaadaya heesahooda kakan, waara dhexdooda 10-20 daqiiqo.
Xagee Ka Arkaa Nibiriga Humpback?
Scotland, Ireland, England waxay ku fiican tahay daawashada nibiriga.
8. Xayawaanada Gaarka Ah Ee Lagu Arko Yurub: yeey
Xiiso badan oo cabsi leh, yeeydu waa mid ka mid ah xayawaannada ku baaba'aya Yurub. Xayawaanadan gaarka ah waxay si fudud ula qabsadaan deegaan kasta, midabkooda qarsoon, cabirkiisuna waa weyn yahay. Waxaa jira noocyo badan oo yeey ah, laakiin celceliska yeeygu wuxuu gaari karaa ilaa 70 kg.
Yeydu waxay ku nooshahay keymo, xirmooyin, waxaana loo arkaa xayawaan aad loo ilaaliyo Yurub. Waxaa jira xarumo daryeel iyo keyd si loo ilaaliyo yeyda oo loo siiyo xaaladaha ugu wanaagsan si aysan gebi ahaanba u dabar go'in..
Xagee ku arki karaa Yeyda Yurub?
Gobolka Liguria ee Talyaaniga, keynta Bavaria, iyo Poland waa yeey’ deegaan doorbid.
9. Xayawaanada Gaarka Ah Ee Lagu Arko Yurub: Hoonbarro
Burburka iyo heesaha biyaha xeebta Talyaaniga, hoonbarrooyinka qurxoon waa muuqaal layaableh. Halka qof waliba ay u badan tahay inuu arkay hoonbarro ku jira sawirro, barkadaha biyaha, ama xadiiqooyinka Yurub, Wax la barbardhigi karaa ma aha doonniida iyo u bogaanshaha xayawaankan qurxoon.
Waqtiga ugufiican ee la arko hoonbarrooyinka waa xagaaga oo ah mid kulul, oo waxaad aadi kartaa safar dolphin-daawashada doon.
Halkee baan ku arki karaa Doolfinnada Talyaaniga?
The Xeebaha quruxda badan ee Cinque Terre iyo badda Ligurian waa meesha ugu fiican ee lagu arko doolfinnada duurjoogta ah ee Talyaaniga.
Markay dadka badankiisu maqlaan “libaax badeed” falcelinta ugu badan ee dabiiciga ah waa shrill iyo cabsi. Si kastaba ha ahaatee, Kalluumeysiga weyn ee 'Basking Shark' ayaa laga yaabaa inuu weynaado oo cabsigelin ku yeesho cabirkiisa, laakiin libaaxaani wuxuu cunaa oo kaliya plankton.
Sidaa darteed, waxaad ku dareemi kartaa gebi ahaanba badbaado agagaaraha kuwan 12 codadka iyo 12 mitir kalluun. The Basking Shark waa shark labaad ee ugu weyn UK, iyo tan ugu wanaagsan ee lagu arko buuraha xagaaga. Sidaas, haddii aad aragto jir saddex geesle ah oo weyn iyo cawl, ka dib hello ruxruxo oo u diyaari kamaraddaada duufaanta 'Sharking Shark'.
Xagee Ka Arkaa Basking Sharks Inn UK?
xeebta Cornwell, Isle of Men, iyo inbadan oo kamid ah Xeebaha Galbeedka England, waxaad ku arki kartaa libaaxleyda gilgishay deegaankoodii dabiiciga ahaa.
11. Xayawaanada Gaarka Ah Ee Lagu Arko Yurub: Wolverine
Qasan, Qasan, waa naaneyska yey ee laatiinka, loo turjumay Gluten. Magacan aan caadiga ahayn wuxuu ku habboon yahay xubinta ugu weyn qoyska Mustelidae – dhammaantood maadaama ay leeyihiin cunto xumo weyn oo aan caadi ahayn.
Sababtan awgeed, wolverines way safri karaan meel fog iyagoo raadinaya cunto, oo hadda laga heli karo Yurub oo dhan.
Halkee baan ku arki karaa Wolverines?
Guud ahaan, dadka wolverine waxay ku urursan yihiin Ruushka, the Taiga, iyo Aasiya. Waxaa intaa dheer, sidoo kale waxaad ku arki kartaa wolverines gudaha seeraha duurjoogta dhaadheer ee UK.
12. Xayawaanada Gaarka Ah Ee Lagu Arko Yurub: Alpine Ibex
Sare 4000 mitir, inta udhaxeysa buuraha barafka, dhagxaanta dhagxaanta leh, waxaad ka heli doontaa Alpine Ibex. Oo leh geeso kori kara ilaa 140 cm, arigan buuraha ah ayaa ka mid ah xayawaanada ugu caansan uguna caansan Yurub.
marka hore, deggan buuraha Alps ee Yurub, Ibex Alpine ah, ma fududa in la ogaado marka loo eego Basking Sharks iyo qorraxda cagaaran. Ka sokow, qoobabkoodu wuxuu fududeynayaa Ibex inuu fuulo oo ka baxsado ugaarsatooyinka buuraha dhagaxa weyn leh.
Xagee Ka Arkaa Ibex Alpine?
Buuraha Talyaani iyo Swiss Alps leeyihiin dhowr aragtiyo yaab leh loogu talagalay duurjoogta iyo daawashada Alpine Ibex.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku farxi doonnaa inaan gacan ka geysano qorsheynta safarka meelaha ugu fiican ee loogu talagalay daawashada xayawaanka duurjoogta ah. Safarka tareenka ee guud ahaan Yurub ayaa ku habboon in lagu safro deegaannada dabiiciga ah ee xayawaankan gaarka ah ee Yurub.
Ma rabtaa inaad ku dhejiso bartayada blog-ka "12 Xayawaanada U gaarka ah ee La Arki Karo Yurub" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Funique-animals-europe%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#xayawaanka amazingwildlifeholidaysworldwide XayawaankaInEurope Inta badan UniqueAnimalsInEurope Xayawaanada Unique